Home » Akụkọ Njem Nleta » Google choro European Tourism ka o weghachite
Google kwuru na obi dị ya ụtọ isonyere ndị European Tourism Commission.
Ihe ntanetị nke Google na-enyere ndị njem aka ijikọ na ndị njem
Mmekọrịta ahụ ga-akwado ọrụ ETC na nkwado, ntinye akwụkwọ maka njem, yana njikọta
Google na ETC ga-arụ ọrụ iji mee ka asọmpi nke ngalaba ndị njem na Europe
Obi dị anyị ụtọ iso ndị European Travel Commission, anyị na-atụ anya na anyị ga-arụkọ ọrụ ọnụ iji nye aka na mgbake mpaghara njem na Europe. Mpaghara njem na-agbanwe ngwa ngwa, anyị kpebisiri ike ịnọgide na-enye ọzụzụ mmụta dijitalụ, nghọta data, na ngwaọrụ iji nyere ndị njem na ndị njem aka ịhazigharị onyinye ha iji mezuo mkpa njem ọhụrụ. Diego Ciulli kwuru, Gọọmentị na-ahụ maka Ọchịchị na Ọha na Ọha na Isi nke Google maka Google.
Google abanyela na European Travel Commission (ETC) dị ka Onye otu na-akpakọrịta iji nyere aka weghachite mpaghara njem ndị njem na Europe na 2021 ma wusie mpaghara ahụ ike dị ka injin maka uto akụ na ụba, ọrụ na mmepe mpaghara maka ndị Europe niile.
ETC na-arụ ọrụ ọtụtụ afọ iji bulie mmepe mmepe njem na Europe, na-eme ka a mata banyere njem ndị a na-amachaghị nke Europe na ịkọwapụta uru nke ahụmịhe mpaghara na njem oge-oge. Dịka akụkụ nke ebumnuche ha ka ha bụrụ ihe ọmụma nwere ntụkwasị obi, Google na-enyere mpaghara ndị njem aka site na nghọta na ngwaọrụ maka ndị ahịa na-aga ahịa (DMO) iji ruo ndị ọbịa bịara n'oge njem njem ha. Nkwuputa nke ndị otu taa na-ewulite Mmemme Mmekọrịta Google DMO nke 2017 nke emere na Nzukọ Ọchịchị Mba Niile iji gbaa ma zụọ ndị DMO iji data na nghọta ịghọta etu esi elebara onyinye ha anya.
Nkwuputa ndị otu Google nke taa na-ewulite na Mmemme Mmekọrịta Google DMO nke 2017 ebubere na Nzukọ Ọchịchị Mba Niile iji gbaa ma zụọ ndị DMO iji data na nghọta ịghọta etu esi elebara onyinye ha anya.
Mmekọrịta Google-ETC ga-enyere aka wulite ikike dijitalụ nke ndị njem na Europe site na mmemme ọzụzụ ahaziri maka ndị otu ETC, na-akwadebe ha maka mgbanwe dijitalụ na agility market. Ọ ga-eduzi atumatu na ịme mkpebi na mpaghara ndị njem site na nyocha njikọta na atụmatụ iduzi echiche. Dịka akụkụ nke ọrụ ha iji kwado ngalaba njem na njem, Google bidoro UNWTO na mmemme mmegharị njem nlegharị anya nke Googleiji zụlite mgbanwe dijitalụ na nkà maka mgbake nke ngalaba ahụ na Europe. Na-arụkọ ọrụ ọnụ, ETC na Google ga-agbanwe nghọta iji kwalite njem na-adigide, na-eme ka ndị njem na-eto eto ma na-enye nkwado akụ na ụba na Europe site na ọrụ ahịa ahịa, webinars na ihe omume, na ọrụ nyocha.
Eduardo Santander, Executive Director nke European Travel Commission kwuru, sị: “Anyị na ETC nwere obi ụtọ ịnabata Google dị ka onye otu so na nzukọ anyị n’oge ọrụ anyị n'ịkwalite njem ndị njem Europe dị mkpa karịa mgbe ọ bụla. Nkwupụta dị mkpa maka mpaghara ndị njem na Europe, ndị otu Google ga-enye anyị ohere ịrụkọ ọrụ ọnụ maka ọdịnihu dị mma, nke siri ike maka njem na Europe, maka abamuru nke ndị Europe niile. Nkwalite mmepe na-adigide na mpaghara njem ndị njem na Europe bụ isi nke atụmatụ ETC ma anyị kwenyere na ndị otu Google ga-enye ndị otu abụọ ahụ ohere ịrụ ọrụ nke ọma na ebumnuche a. "